နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဘယ်သူရေးစပ်ခဲ့သလဲ - တက္ကသိုလ်စိုးမိုး ~ NPNGMyanmarP
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဘယ်သူရေးစပ်ခဲ့သလဲ - တက္ကသိုလ်စိုးမိုး
12:06 AM NPNG(MyanmarP)
မြန်မာတို့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်သောနေ့၊ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်းကို ပြန်ရသောနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့သည် ၂၀၁၀ တွင်(၆၂)နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ထိုနေ့ထိုရက်တွင် အလံတော်တိုင်ထိပ်ဆီသို့ ငွားငွားစွင့်စွင့်၊ တလူလူလွင့်တက်လာသော နိုင်ငံတော်အလံနှင့်အတူ "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းသံကို အများပြည်သူတို့ ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြားရမှာဖြစ်ပါသည်။ "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းသည် လွတ်လပ်ရေးဂုဏ်ပြုတေးသီချင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အမျိုးသားသီချင်း စသည် ဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ကိုဂုဏ်ပြုသော "နိုင်ငံတော်သီချင်း" လည်း ဖြစ်ပါသည်။
"ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းသည် ခေတ်အဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းခဲ့သော တိုင်းသိ၊ ပြည်သိ၊ ကမ္ဘာသိသီချင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သီချင်းရေးစပ်ခဲ့သူ၊ မွေးဖွားပေးခဲ့သူ၊ မူလပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်ကိုတော့ သိသူမရှိသလောက်ဟု ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာမကြေသီချင်းကို ရေးခဲ့သူမှာ စန္ဒရားဦးစိန်မြမောင် ဖြစ်ပါသည်။ သူယခု ဒီသီချင်းကို ကြားနိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါ။ သူကွယ်လွန်သွားသည်မှာ ၂ နှစ်နီးပါး ရှိခဲ့ပါပြီ။
ဦးစိန်မြမောင်သည် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ကာလပေါ်နှင့် ခေတ်ဟောင်းတေး စိစစ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပါသည်။ သူမကွယ်လွန်မီအချိန်အထိ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ဆို၊ က၊ ရေး၊ တီး ပြိုင်ပွဲကော်မတီဝင်အဖြစ် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တေးသီချင်းများနှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင် တေးသီချင်းများစွာကို ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သူရေးစပ်ခဲ့သော သီချင်းများတွင် အဆိုတော်မေလှမြိုင် သီဆိုသော "တောတွင်းဖိတ်ခေါ်သံ" တေးသီချင်းများမှာ အထူးထင်ရှား ရေပန်းစားလှပါသည်။ ဦးစိန်မြမောင်သည် ကဏ္ဍစုံ၊ ထောင့်စုံမှ ရသစုံပေါ်လွင်သော တေးသီချင်းပုဒ်ရေ တစ်ထောင်ကျော် ရေးသားသီကုံးခဲ့သူဘွဲ့၊ မော်ကွန်းဝင် (ပထမအဆင့်)နှင့် ၀ိဇ္ဇာထူးချွန်ဆု (ဒုတိယအဆင့်) တို့ကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
ဦးစိန်မြမောင်နှင့် ကမ္ဘာမကြေသီချင်း ပတ်သက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းက အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှိလှပါသည်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းဟူသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် ရှိသင့်ရှိစမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုတာ ရှိရမှာဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသည့် ၁၉၄၈ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်တင်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက် ထိုနေ့နိုင်ငံတော်အလံတင် အခမ်းအနားမှာ သီဆိုဖို့ သီချင်းတစ်ပုဒ် လိုအပ်လာပါသည်။ သည်အတွက် ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက လွတ်လပ်ရေးအလံတင် အခမ်းအနားမှာသီဆိုဖို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးရန် ဆရာရွှေတိုင်ညွန့်အား ခေါ်လာပေးရန် ဦးစိန်မြမောင်ကို ပြောဆိုပါသည်။ ဦးစိန်မြမောင်က ဆရာရွှေတိုင်ညွန့် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက် မရှိတော့ကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ရာ ဦးနုက တခြားတေးရေးဆရာများနှင့် တိုင်ပင်ရေးသားပေးရန် ဦးစိန်မြမောင်အား ထပ်မံတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပြန်ပါသည်။
ဦးစိန်မြမောင်က ဆရာစိန်ဝေလျှံ၊ ဒဂုန်ဆရာတင်၊ စောင်းဦးဘသန်း၊ ဂီတာဦးစိန်အောင်နှင့် ဆရာရန်နိုင်စိန်တို့ကို လိုက်လံခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပါတော့သည်။ သူတို့အားလုံး စုဝေးရောက်ရှိလာပြီး သီချင်းရေးစပ်ဖို့ တိုင်ပင်ရာ၊ ဆရာဦးစိန်ဝေလျှံနှင့် စောင်းဦးဘသန်းတို့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားများရန်ဖြစ်ကြရာမှ သီချင်းရေးဖို့ အစီအစဉ် ပျက်ပြားခဲ့ရပါတော့သည်။ နောက်ထပ် သီချင်းရေးစပ်ဖို့ မည်သူ့ကိုမျှ စည်းရုံး၍မရဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ အကြောင်းစုံကို ဦးစိန်မြမောင်က ဦးနုထံတင်ပြရာ ဦးနုက ဦးစိန်မြမောင် တစ်ယောက်တည်း ရေးနိုင်က ရေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားတာဝန် ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ နိုင်ငံတော်တာဝန် ဖြစ်သည့်အတွက် ဦးစိန်မြမောင်က ရဲဝံ့စွာတာဝန်ယူ၍ "တရားမျှတ၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ" အစချီ "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းကို ဦးနုအိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း ရေးသားစပ်ဆိုခဲ့ရပါတော့သည်။
ထိုသို့ ရေးသားစပ်ဆိုရာ၌ ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်၏ "ဒို့ဗမာ" သီချင်းသံစဉ်စာသားများကို အခြေခံ၍ "တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ" အစချီ၊ ပထမခြေဆင်းပိုဒ်နှင့် "ကမ္ဘာမကြေ" ဒုတိယသံပြိုင်တို့ကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးအောင် ရေးသားခဲ့ပါသည်။
သီချင်းအစအဆုံး တစ်ပုဒ်လုံးကို ဆရာဇော်ဂျီဦးဆောင်သော အကဲဖြတ်အဖွဲ့က သီချင်းစာသားများ၊ တစ်လုံးချင်း အသေးစိတ် စိစစ်ပြီး သီချင်းကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
အကဲဖြတ်အဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးနောက် ၀န်ကြီးအဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်အဖွဲ့ နှစ်ရပ်စလုံးကပါ ထပ်ဆင့် အတည်ပြုခဲ့ကြပါတော့သည်။ ဤသို့ အဆင့်ဆင့် အတည်ပြုပြီးသော "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းကို မြန်မာ့အသံမှ ဒါရိုက်တာ ဦးခင်ဇော်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တရောက်ရှိနေသော အမေရိကန်တီးဝိုင်းတစ်ခု၏ အကူအညီဖြင့် အသံသွင်းခဲ့ပါသည်။ သီချင်းသီဆိုသူက အဆိုတော် ရွှေညာမောင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် "တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ… တို့ပြေ၊ တို့မြေ…. များလူခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းစေဖို့…. ခွင့်တူညီမျှ…. ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်… တို့ပြည်…. တို့မြေ… ပြည်ထောင်စုအမွေ အမြဲတည်တံ့စေ… အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ…. ထိန်းသိမ်းစို့လေ...." "ကမ္ဘာမကြေ… မြန်မာပြည်… တို့ဘိုးဘွားအမွေစစ်မို့… ချစ်မြတ်နိုးပေ… ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ… ဒါတို့ပြည်… ဒါတို့မြေ… တို့ပိုင်တဲ့မြေ….. တို့ပြည်…. တို့မြေ…. အကျိုးကို…… ညီညာစွာတို့တတွေ… ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ… တို့တာဝန်ပေ…. အဖိုးတန်မြေ" ဟူသော ဤ "ကမ္ဘာမကြေ" သီချင်းသည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင်အခမ်းအနားတွင် ယူနီယံဂျက်အလံဖြုတ်ချ၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံ လွင့်ထူရမည့်အချိန်၌ သီဆိုရမည့် နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်လာပါတော့သည်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး ချီးမြှင့်ပေးအပ်ရာတွင် ဦးစိန်မြမောင်သည် ဤကမ္ဘာမကြေသီချင်းဖြင့် ၀ဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဦးစိန်မြမောင်က သူမကွယ်လွန်မီ ဤ ကမ္ဘာမကြေသီချင်းကို သူရေးစပ်ခဲ့ကြောင်း ခိုင်မာသော အထောက်အထားတို့ဖြင့် တင်ပြနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယနေ့နိုင်ငံတော်က သူ့အား ၀ိဇ္ဇာထူးချွန်ဆု (ဒုတိယအဆင့်) ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြန်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လွတ်လပ်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်သီချင်း ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိနေသော မြန်မာတို့၏ ဇာတိဂုဏ်၊ ဇာတိမာန်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တို့သည် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပေသည်။
(7Day News ဂျာနယ် အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၄၃ နှင့် မြန်မာ့သွေးတို့မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)